Hurumende Inoti Haina Mari Yekuwedzera Vashandi Vayo
Gumiguru 05, 2010
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vanoti hurumende haina mari pari zvino yekuti iwedzere vashandi vayo mari dzemihoro.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa muHarare neMuvhuro pakati pevamiriri vevashandi naVaTsvangirai. VaTsvangirai vanonzi vakaudza vashandi ava kuti hurumende yakanga ichifungidzira kuti ichawana mari yakawanda gore rino, izvo zvaizoita kuti ikwanise kupawo vashandi vayo mihoro inovakwanira.
Mwedzi wapera, vashandi vehurumende vakaratidzira vakaungana pamahofisi egurukota rezvevashandi vehurumende, VaEliphas Mukonoweshuro, vachiti vanoda kuti mari dzavo dziwedzerwe.
Vashandi vehurumende vari kuda kuti mari dzemihoro dzitangire pamazana mashanu emadhora. Pari zvino mushandi anotambira mari iri pasi pasi, ari kutambira zana nemakumi manomwe emadhora pamwedzi.
Vakafanobata chigaro chaChief Executive Officer weZimbabwe Teachers Association, Zimta, VaSifiso Ndlovu, vaudza Studio7 kuti sangano ravo rinotambira zvakataurwa naVaTsvangirai, uye rinofara kuti pava nemukana wekuti vaite hurukuro.
VaNdlovu vatiwo vachakurudzira nhengo dzavo kuti dzisaramwe mabasa zvichitevera mashoko ehurumende aya.
Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi, reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, VaTakavafira Zhou, vaudzawo Studio7 kuti sangano ravo richanzwa kubva kunhengo dzaro neChishanu pamusoro pemashoko ehurumende aya, rozoona matanho ekutora.